Cabdirashiid Janan oo Qaab Qabiil ula heshiineyso Dowlada waqtiga ka dhacay ee Farmaajo | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Cabdirashiid Janan oo Qaab Qabiil ula heshiineyso Dowlada waqtiga ka dhacay ee...
Cabdirashiid Janan oo Qaab Qabiil ula heshiineyso Dowlada waqtiga ka dhacay ee Farmaajo
Waxaa saacadihii lasoo dhaafay soo baxayay warar sheegaya in Wasiirkii amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan uu heshiis la galay Dowlada federaalka lagana yaabo in uu tago saacadaha soo aadan degmada Baled Xaawo ee gobolka Gedo.
Wararka ka imaanaya degmada Baled Xaawo ayaana sheegaya in wadahadlo hoose oo socday maalmihii lasoo dhaafay hada marayaan heer gabo gabo ah ayna u badan tahay in Wasiir Janan kasoo goosto Axmed Madoobe lana heshiiyo dowlada Federaalka.
Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo la hadlay Idaacada BBC-da ayaa qiray in wadahadalo hoose u socdaan dowlada federaalka, waxa uuna beeniyay in uu jiro heshiis uu hada la gaaray dowlada.
Cabdirashiid Janan oo aad ugu dhawaa Madaxweynaha Jubbaland ayaa marar badan kula dagaalamay degmada Baled Xaawo ee gobolka Gedo, waxa uuna mudooyinkii dambe saldhig u ahaa degmada Mandheera ee dalka Kenya.
Wadahadalada hoose ee u socda Cabdirashiid Janan iyo dowlada federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay dhabar jab xoogan ku noqon doontaa Madaxweynaha Jubbaland oo gabi ahaan weyn doona gacan ku heynta gobolka Gedo oo inta badan hada DF maamusho.
Previous articleShir maalinti labaad u socda Xisbiga Hanti wadaaga kacaanka Xarunta Xalane
Next articleNatiijada ugu dambayn la filan karo Teendhada Xalane
Beesha caalamka oo Dusha u saartay Wixii ka dhaca Muqdisho in...